REPUBLICADAINIK | कांग्रेसलाई बलियो बनाउने नेविसंघ हो, हामी चुप बसेका छैनौंः महामन्त्री कुँवर (अन्तर्वार्ता) - REPUBLICADAINIK
महेश्वरी कुँवर, महामन्त्री, नेपाल विद्यार्थी संघ
पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा निवासी महेश्वरी कुँवर नेविसंघको महामन्त्री हुन् । पदमकन्या क्याम्पसबाट नेविसंघको राजनीति शुरु गरेकी हुन् । २०४१ सालमा जन्मिएकी कुँवरले जीवनमा राजनीतिबारेमा बुझ्दै गएपछि विचार र आदर्शले नेपाली कांग्रेसमा डोर्‍याएको थियो । २०५८ सालपछि कुँवर नेविसंघको सक्रिय कार्यकर्ता नै बनिन् ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न पदमकन्या कलेज बागवजार पुगिन् । पहिलो पटक २०६० सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य बनेकी कुँवर पुनः २०६२ मा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । पदमकन्या कलेजमा २०६५ सालमा स्ववियु उप–सभापति भएपछि उनको राजनीतिक जिम्मेवारी बढ्यो । राजनीतिक अग्रमोर्चामा देखिएकी कुँवर राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा दुई पटक खुट्टा भाँचिदा पनि कहिल्यै विचलित भइनन् । उनी निरन्तर विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील रहिन् ।
२०७२ सालदेखि नेविसंघको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित कुँवर नेविसंघको सह–महामन्त्री हुँदै हाल महामन्त्री छिन् । अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर कुँवर अध्ययन र लेखनमा रुचि राख्छिन् । ‘वाल्वा हुँदै पाल्पा र नेपाल विद्यार्थी संघको मैदानबाट महिला नेतृत्व’ उनका यसअघि प्रकाशित कृति हुन् । आध्यात्म र समाज सेवामा पनि उत्तिकै चासो राख्ने कुँवर विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध छिन् । उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सम्मानित भएकि छिन् । महामन्त्री महेश्वरी कुँवरसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
नेविसंघको राजनीतिमा किन लाग्नुभयो । कांग्रेसमा भन्दा सजिलो हुन्छ भनेर हो कि ?
कांग्रेस वा नेविसंघको राजनीति सजिलो वा अफ्ठ्यारोका लागि गरेको होइन । नेविसंघबाट राजनीति शुरु भयो । महामन्त्री बनेको छु । राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि गर्ने हो । परिवर्तनका लागि गर्ने हो । शुरुदेखि नै नेविसंघको राजनीति गरेको हुँ । पदम कन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्न शुरु गरेको थिएँ । पदम कन्या क्याम्पसमा म पपुलर नै थिएँ । मलाई टिकट दिइयो भने जित्छु भन्ने थियो । त्यसपछि मलाई सदस्यको टिकट दिइयो । जिते पनि । मैले २०५८ सालदेखि नेविसंघको राजनीति शुरु गरेको हुँ । त्यही वर्ष नै म पदम कन्या क्याम्पस पनि भर्ना भएको थिएँ ।
छोटो समयमा नै तपाई नेविसंघको महामन्त्री हुनुहुन्छ कसरी बन्नुभयो ? नेताहरूको आशीर्वाद त छिटै लागे छ होइन ?
नेविसंघको राजनीति र काम गरेकै कारण महामन्त्री बनेको हुँ । नेताहरूको आशीर्वाद मलाई मात्रै होइन धेरैलाई छ । म अरु जस्तो लुकाएर कुरा गर्ने मान्छे होइन । मेरो राजनीतिक जीवन पनि हेर्नुस् । नेविसंघको राजनीति गर्दै आएँ । म पदम कन्यामा दुई पटक स्ववियुमा निर्वाचन लडेँ । मलाई पदम कन्या क्याम्पसको सभापति बन्ने मन थियो । नेविसंघको राजनीतिमा निरन्तर लागिरहेँ । २८ वर्ष उमेर काटे । त्यसपछि स्ववियु सभापति बन्ने सपना तुहियो । मलाई ईकाइमा बस्ने रहर थिएन । म नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य भइन ।
नेविसंघको महाधिवेशन भयो भने उपयुक्त पदमा उम्मेदवार बन्ने भनेर तयारीका साथ बसेको थिएँ । महाधिवेशन नभएपछि कार्यसमिति मनोनीत गरेर ल्याउने भन्ने कुरा भयो । राजीव ढुंगानालाई पार्टीले अध्यक्ष बनायो । त्यही क्रममा मलाई पनि पार्टी नेतृत्वले विश्वास गरेर महामन्त्री मनोनीत गरेको छ । नेविसंघप्रति मेरो लगानी, संगठनमा मैले पुर्‍याएको योगदान, पार्टी नेतृत्वको विश्वासलगायतले मलाई महामन्त्री बनाइएको हो । राजनीतिमा लामो र छोटो समयभन्दा पनि संगठनमा व्यक्तिले गरेको योगदानको मूल्यांकन हुन्छ ।
नयाँ कार्यसमिति आए पनि नेविसंघले केही काम गर्न सकेन भनेर आरोप लागिरहेको छ । आफ्ना नेता कार्यकर्तासम्म तपाईहरू कोरोनाका बेला कसरी जानु हुन्छ ?
कोरोना महामारी हुँदा पनि हामी देशभरिका नेविसंघका नेता कार्यकर्तासँग विभिन्न माध्यममार्फत सम्पर्कमा गइरहेका छौँ । साना, ठूला कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । नेविसंघले केही गर्नै सकेन भन्ने पक्षमा म छैन । त्रिविमा विद्यार्थी नेताहरू अनसन बसेका छन् । विभिन्न रुपमा आन्दोलन भइरहेको छ । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाका नाममा उठाइरहेको शुल्कका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिएका छौँ ।
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूसँग बैठक बसेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । जुमबाट पढाएको शुल्क मापदण्ड तोकेर लिनुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्क लिन पाइँदैन भनेका छौँ । सामाजिक दुरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा सानातिना दवावका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । कोरोना भएका कारण ठूला कार्यक्रम र आन्दोलन हुन सकेको छैन । विद्यार्थीका हक, अधिकारका लागि नेविसंघ चुप लागेर बसेको छैन ।
निजी स्कुलहरूले अनलाइन कक्षामा पढाएको बहानामा शुल्क असुली रहेका छन् । नेविसंघ यो विषयमा बोल्नै सकेको छैन । किन होला ?
नेविसंघ बोलिरहेको छ । विरोध गरिरहेको छ । सचेत गराइरहेको छ । हाम्रो अध्यक्ष राजिव ढुंगानासहित सबै पदाधिकारीले आवाज उठाइरहेका छौँ । विरोध गरिरहेका छौँ । सबै विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठक बसेर यस विषयमा विज्ञप्ति पनि निकालेका छन् । कोरोनाले गर्दा अहिले हामी सडकमा जान पनि सक्दैनौँ ।
अनलाइन कक्षाका नाममा निजी विद्यालयको ज्यादतिका विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । खबरदारी गरेका छौँ । हामी चुप छैनौँ । जथाभावी शुल्क उठाउने निजी विद्यालयको हिसाव किताब राखेका छौँ । समय आयो भने त्यसको जवाफ माग्ने छौँ । सरकार पनि निकम्मा भयो । विद्यार्थी र अभिभावक भन्दा पनि ती निजी स्कुलको पक्षमा झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार देखिएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला सरकारले विद्यार्थीलाई कुनै राहतको कार्यक्रम दिएन । नेविसंघ यो विषयमा पनि चुपचाप बस्यो । किन होला ?
नेविसंघ चुप लागेर बसेको छैन । बोल्ने कुरामा बोलेका छौँ । आन्दोलन गर्नुपर्दा सडकमा उत्रिएका छौँ । विद्यार्थीका विषयमा सबैभन्दा धेरै नेविसंघले बोलेको छ । सडकमा लाठी खाएको छ । यो कम्युनिस्ट सरकारले विद्यार्थीलाई मात्रै होइन गरिव जनतालाई नै राहत दिएको छैन ।
सरकारमा बसेकाहरूले जनताको नाममा, स्वास्थ्यका नाममा लुट मच्चाइरहेका छन् । दवाव दिने काम हामीले दिएका छौँ । यो सरकारले नै हाम्रो मागको सुनुवाई नै गर्दैन । जनताको भन्दा पनि नेकपाका दुई–चार जनाका लागि यो सरकार हो । जनताको लागि होइन । हामी सधैँ सरकारलाई दवाव दिइरहेका छौँ ।
नेविसंघ सक्रिय छैन भन्छन् । तपाईहरू पदाधिकारी मात्रै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेविसंघलाई सक्रिय बनाउन कस्ता कार्यक्रमको आवश्यक्ता पर्छ ?
नेविसंघ सक्रिय छैन भन्न मिल्दैन । तपाईलाई नेविसंघको कार्यक्रम र कामहरूका बारेमा धेरै जानकारी रहेनछ । हामी आएको ७–८ महिना भएको छ । हामी आउनेवित्तिकै कोरोनाले गर्दा सहज रुपमा काम गर्न पाएनौँ । कोरोनाको महामारी शुरु भइहाल्यो । त्यही बेला नेविसंघले पूर्णता पाउने थियो । कोरोना महामारी, दशैँ, तिहार आदिका कारण समस्या भयो । कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ । विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउने गरेर कार्यक्रम भइरहेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा हामीलाई समस्या भएको हो । नेविसंघ चुप लागेर बसेको छैन । गतिविधिहरू भइरहेका छन् ।
नेविसंघ विघठनको गर्नुपर्छ भनेर पनि आवाज उठ्न थालेका छन् । अहिलेको नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा चासो पनि दिँदैनन् । तपाईहरूले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न सक्नु भएन रे नि ?
नेविसंघ विघठन हुँदैन । तपाईले गलत प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी र भरोसाको केन्द्र भनेको नेविसंघ हो । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षण नहुन सक्छ । उनीहरूलाई राजनीतिमा चासो दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । कांग्रेसका लागि नेविसंघ भनेको अनिर्वाय छ । नेविसंघ भनेको कांग्रेस उत्पादन गर्ने ठाउँ हो । नेविसंघलाई झन् सक्रिय बनाउने आवश्यक्ता छ । नेविसंघ भन्ने संस्था विघठन हुँदैन । बरु विघठन हुने भनेको कार्यसमिति हुन सक्छ । संस्था हुँदैन । मेरो कार्यकाल विघठन होला । तर, अर्को कार्यसमिति आउँछ । समय परिवेशले नयाँ पुस्ता राजनीतिसँग असन्तुष्ट छ होला । त्यो पुस्तालाई राजनीतिक विषयमा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ ।
नेविसंघमा महामन्त्री धेरै छन् । तपाईहरूका बीच तालमेल छैन । कार्यक्रम हुँदा पनि समन्वय हुने गरेको छैन । किन होला ?
तालमेल छैन भन्नै मिल्दैन । कार्यसमितिमा छलफल र विभिन्न माध्यमबाट परामर्श गरेर कार्यक्रम दिइने गरेको छ । विज्ञप्ति पनि सल्लाह गरेरै जारी गर्ने गरिएको छ । कहिले काहिँ अध्यक्ष राजिव ढुंगाना बाहिर हुँदा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर सहमतिमै कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । विवाद छैन । तपाईहरूको बुझाइमा गलत भएको हुन सक्छ ।
नेविसंघको अहिलेको कार्यसमितिमा रहेका सबै पदाधिकारी तलैदेखि राजनीति गरेर आएका छन् । बुझेर राजनीति गरेका छन् । त्यही कारण पनि हामीबीच सहमति, सहकार्य र परामर्शबाट काम हुने गरेको छ । विद्यार्थीको राजनीतिमा संघर्ष गरेर आएका, कालो चिया खाएका, दुःख पाएकाहरूनै पदाधिकारी छन् । विद्यार्थीको पीडा बुझ्ने पदाधिकारीहरू छन् । अन्य संगठनमा विवाद भएको भए मलाई थाहा छैन । तर, नेविसंघमा हामी पदाधिकारीहरूका बीच कुनै समस्या छैन ।
तपाईले नेविसंघको राजनीतिपछि पार्टीको राजनीति गर्ने कि ? राजनीति छाडेर अरु पेशा व्यवसाय गर्ने ?
राजनीति छाड्ने त कुरै छैन । राजनीति गरेर यहाँसम्म आइसकेको छु । आधा उमेर राजनीतिमा बिताइसकेको छु । राजनीतिमा नै जीवन विताउने हो । राजनीति छाड्ने होइन कि, बरु बल्ला राजनीति शुरु भयो भन्नुस् ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विभिन्न बहानामा झगडा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई मिल्नका लागि विद्यार्थीले किन दवाव दिन सक्नु हुन्न ?
हामीले दवाव दिएका छाैं । दवाव दिने भनेर नेताहरूलाई घर घेरेर थुन्ने भन्ने कुरा हुँदैन । फोन गरेर होस्, विभिन्न माध्यमबाट होस् वा प्रत्यक्ष भेट भएका बेला मिल्नका लागि सल्लाह सुझाव दिने गरेका छौँ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू हाम्रा अभिभावक हुन् । उहाँहरूबाटै हामीले सिक्ने हो । हामीलाई सिकाउन पनि शीर्ष नेताहरू मिलेर जानुपर्छ ।
एउटा कुरा के पनि हो भने कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन लागेको छ । यो बेला गुटका बैठक, भेला, आलोचनाहरू त हुन्छन् । यसलाई कार्यकर्ताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । अलिक धेरै गुट र विवाद भयो कि भन्ने कुरा मात्रै हो । कोरोनाले गर्दा फागुनमा महाधिवेशन होला जस्तो मलाई लाग्दैन । महाधिवेशनले गर्दा गुट र आलोचना देखिएको हो ।
नेविसंघले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । अहिले पदाधिकारी मात्रै छन् । पूर्णता नपाएरै तपाईहरूको कार्यकाल सकिने भयो है ?
नेविसंघले पूर्णता पाउँछ । ढुक्क भएर बस्नुस् । दशैँ अगाडि नै नेविसंघलाई पूर्णता दिने कुरा थियो । तिहार पछाडि नेविसंघले पूर्णता पाउँछ । तयारी भएको छ । पार्टी नेतृत्वसँग सरसल्लाह भइरहेका छन् ।
Published : Friday, 2020 November 13, 9:53 am